Shirka Hogamiye yaasha Muslimiinta oo ka furmaya Kuala Lumpur | Caalamka.com
Home CAALAMKA Shirka Hogamiye yaasha Muslimiinta oo ka furmaya Kuala Lumpur
Shirka Hogamiye yaasha Muslimiinta oo ka furmaya Kuala Lumpur
Shirka Waddamada Muslimiinta ayaa maanta oo khamiis ah ka furmaya magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda Malaysia.
Shirkaan oo ayaa waxaa ka qeybgelaya inta badan hoggaamiyayaasha Waddamada Caalamka Islaamka, waxaase ka maqan qaar ka mid ah dalalka ugu samaynta badan.
Dalalka ka qeybgelaya shirka ayaa waxaa ka mid ah Iraan, Turkiga, Qadar oo ay ka imaanayaa madaxda ugu sarayso iyo Madax kale oo la imaanaysa dalalka uslimiinta.
Shirkaan waxaa ka maqan oo ka qayb gali doonin Madaxwaynaha Dalka Indinosia iyo Ra’isul Wasaaraha Pakistan oo la filayay in ay ka qayb gali doonaan shirkaan iyada oo marsii horaysay la sheegay in ay aqbaleen Casuumaada Ra’isul wasaaraha Malesia.
Ra’isalwasaaraha Dalka Pakistan Cimran Khan ayaa mar qura badalay Fikirkiisii ahaa ka qayb galka shirkaas ka dib markii uu todobaadkan booqasho ku tagay dalka Sucuudiga, beddelkiisana waxaa ka qeybgelaya wasiirkiisa arrimaha dibadda.
Dowladda Malaysia ayaa sheegtay in shirkan uusan ahayn mid liddi ku ah Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC.
Shirkaan oo ay ka qayb gali doonaan 250 Ergo oo ka kala socda 52 dal oo Muslimiin ah, waxaana ayaa waxaa looga hadli doonaan, Dhibaatada ay haysata MuslimiintaRohingya, kuwa Turkistan Bari ama Uighurs dagaalka ka socda dalka Yemen, Sinaan la’aanta Jinsiga, iyo kala saraynta Dhaqaalaha ee dalalka Islaamka.